Andeha Hiarahaba Ireo Mpikambana Roa Vaovao. Manaraka Izany: Mila Anao Izahay Ho An’ny NewsFrames! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2017 14:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, English, English
Mpanao gazety sy Mpikaroka i Belen Febres-Cordero ary nisoratra anarana tamin'ny fandaharana dokotorà momba ny Fifandraisana izy ankehitriny, manadihady izay fifandraisana mety misy eo amin'ny haino aman-jery hafa sy ny fahasalam-behivavy. Nandray anjara tamin'ny tetikasa isan-karazany momba ny zon'olombelona tao Amerika Latina sy Kanada izy, anisan'izany ny asany tao amin'ny Foibem-pikarohana ho an'ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (IDRC) sy ny UNICEF.
Jereo ny vaovao farany momba ny andrana vaovao noforoninay: ezaka manazava ny vaovao diso sy namboarina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Momba an'i Belen, miantso fiarahamiasa amin'ny Rising Voices Marginalia izahay. Ny fanadihadiana voalohany niarahanay niasa tamin'ny MIT Media Lab dia nifantoka tamin'ny vondrom-piarahamonina tompotany ao Amerika Latina, sy tao amin'ny toby Standing Rock ao Amerika Avaratra nandritra ny 2016-2017, afaka mamaky izany ato ianao.